गाई काटेर खान्छु भन्नेहरुले किन कुकुर काटेर खान्छु भन्दैनन ?: संसद राजेन्द्र लिङ्देन (भिडियो सहित ) – पुरा पढ्नुहोस्……
गाई काटेर खान्छु भन्नेहरुले किन कुकुर काटेर खान्छु भन्दैनन ?: संसद राजेन्द्र लिङ्देन (भिडियो सहित )
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका एक मात्र संसद राजेन्द्र लिङ्देनले गाई काटेर खानु प्रति घोर बिरोध र आपत्ति जनाएका छन्। उपसभामुख राधिका तामाङ्गले गाई काटेर खानु पाउनु पर्छ भन्ने कुरा भने पनि नभने पनि यो अशोभनीय छ ।
अहिलेको शताब्दीमा गाइ मात्रै हैन कुनै पनि जनावरलाई काटेर खानु हुदैन । पशु अधिकार को कुराहरु छन् त्यसैले पनि यस्तो कुरा गर्नु उचित छैन । त्यसै माथि राष्ट्रिय जनावर गाई खानु पाउनु पर्छ भनेर भन्नु निन्दनीय छ । भत्सना पूर्ण छ ।
सडकहरुमा बग्रेल्ती छाडा छोडिएको गाइगोरु मात्रै हैन त्यतिकै मात्रामा कुकुर पनि छन् के त्यसलाई पनि काटेर खानु पाइन्छ त ? पाइदैन नि ! त्यसैले कुनै पनि जनावर काटेर खानु पाउनु पर्छ भनेर नारा लगाउनु निन्दनीय छ । संविधानमा जे व्यस्था छ त्यहि अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खानु पाइदैन ।
Posted in धर्म-कर्म
Prev“सिधा कुरा जनतासँग” आजको स्पेशल कार्यकम लाइभ हेर्नुहोस् (Live News 24 tv) Share गर्नुहोस्
Nextकार्यालय सहयोगीनै डाक्टर झै बिरामी जांच्छन्, औषधी दिन्छन् । पानी नपिई आमरण अनसनमा ३ युवा ! (भिडियो सहित सिधाकुरा जनतासंग )
पोर्चुगलबाट अनुप भुषालले अन्तत: यसरि मागे माफि । ईराकबाट उद्धारकालागि ठुलो आस राख्दै भुटानी चेलीले रबिलामिछानेसंग मागिन गुहार ! (भिडियो सहित )
गौतम बुद्ध रँगशालामा एक्कासी आज राति के भयो यस्तो ! धुर्मुश तना’वमा- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
१० वर्षीय छोराले हाम नफाल्नु भनेर कराउँदा -कराउँदै छोरासँगै यसरी पुलबाट हाम फालेर गरिन् आत्महत्या-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
भिडियोमा हेर्नुस्.. नेपाल आइʼडलकी रचना रिमालको घरमा पुग्दा, आमाले रचनाको बाल्यकाल सम्झेर आँʼसु झार्दै गाइन मनै छुने गित…